musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nharembozha-ins dziri kudzoka kuLufthansa nendege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Munguva yekutora nhare, iyo QR kodhi yemapepa zvitupa izvozvi inogona kuongororwa uye nekudaro inotariswa nekukurumidza uye nyore.
Lufthansa inodzosera nhare yekutarisa kune nendege kubva kunzvimbo dzisiri njodzi.
Vafambi zvakare vanogona kuve yavo yekukwira yekupasisa yakapihwa yakanangana neyavo smartphone.
Nedigital boarding pass, hapana rimwe gwaro rinodiwa paketi yekutarisa.
Lufthansa iri kupa zvakare vafambi vayo nzira iri nyore yekutarisa. Pane dzese nendege dze2000 dzevhiki nevhiki kubva kunzvimbo dzisiri dzenjodzi dzeSchengen nzvimbo (parizvino kubva kuSpain, Itari kana Sweden, semuenzaniso) kuenda kuGerman, vafambi vanogona zvakare kupasisa yavo yekukwirisa yakananga pafoni yavo kana vachipinda.
Izvi zvinogoneswa ne otomatiki uye edhijitari yekuongorora yeEU zvitupa zvitupa, izvo zvinoratidza zvizere kuzara kwekudzivirira, uye COVID-19 bvunzo mhedzisiro kubva kuCentogene murabhoritari.
Munguva yekutarisa kwenhare, iyo QR kodhi yemapepa zvitupa izvozvi inogona kuongororwa uye nekudaro inotariswa nekukurumidza uye nyore. Izvi zvinoreva kuti iyo digital boarding pass inogona kupihwa uye imwezve gwaro rekutarisa pacheki-chekupinda paairport hapachadiwe.
Asi zvakafanana zvinoshanda kune mamwe akawanda Lufthansa nendege: chero munhu ane hanya kuti haana zvitupa zvakakodzera zverwendo anogona kuvhenekwa na Lufthansa Service Center anosvika maawa makumi manomwe nemaviri asati asimuka. Izvi zvinogona kuve humbowo hweyedzo, yakapona COVID-72 chirwere uye majekiseni. Kusimbiswa kwekupinda kwedhijitari kunyorera kunogona kuongororwa nenzira iyi. Kutenda mhinduro nyowani dzedigital, cheki ikozvino yave otomatiki uye nekudaro inokurumidza, zvakare paSevhisi Center.
Ndege inopa zano vashanyi vayo kuti pamusoro pechiratidzo cheadhijitari, zvitupa zvepakutanga zvakadhindwa zvinofanirwa kutakurwa parwendo kusvika chimwe chiziviso.